भारतीय योगगुरू रामदेवसहित ५ जनाविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी, समातिएलान् त अब! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > भारतीय योगगुरू रामदेवसहित ५ जनाविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी, समातिएलान् त अब!
admin June 29, 2020 June 29, 2020 जीवनशैली, समाचार	0
एजेन्सी । भारतीय योगगुरु रामदेवसहित ५ जनाले स्वीकृति नलिई कोरोना निको पार्ने दावी गरिएको औषधि सार्वजनिक गरिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
यो मात्रै नभई विभिन्न प्रहरी चौकीहरुमा रामदेवविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आयुष मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कोभिड-१९ निको पार्ने भन्दै आयुर्वेदिक औषधी सार्वजनिक गरेकोले रामदेवविरुद्ध एफआइआर दर्ता भएको हो।
हरिद्धारमा रहेको पतञ्जली आयुर्वेदले कोभिड-१९ निको पार्ने भन्दै मंगलबार ‘कोरोनिल’ औषधि सार्वजनिक गरेको थियो। यो औषधि कोभिड-१९ पोजेटिभ देखिएका विरामीहरूमा सात दिने प्रयोग गरेको र यसले निको पारेको दावी समेत गरिएको थियो। निम्स विश्वविद्यालयको संलग्नतामा जयपुरको निजी इन्स्टिच्युटमा औषधिको प्रयोग गरिएको बताइएको थियो।